Warsaxafadeed Midowga Yurub ku aadan dorashada Hogaanka Golaha Shacabka Soomaaliyeed - Avropa Xarici Fəaliyyət Xidməti
EEAS > Keniya > Warsaxafadeed Midowga Yurub ku aadan dorashada Hogaanka Golaha Shacabka Soomaaliyeed
Warsaxafadeed Midowga Yurub ku aadan dorashada Hogaanka Golaha Shacabka Soomaaliyeed
Mogadishu, 13/01/2017 - 09:13, UNIQUE ID: 170113_9
Muqdisho, 12ka Janaayo, 2017 - Midowga Yurub waxay soo dhoweynaysaa doorashada hogaanka Golaha Shacabka Soomaaliyeed. Waa tallaabo muhiim oo ku aadan kala guurka siyaasadeed ee Soomaaliya una sahlayaa sidii loo so afjari habka dadban ee doorashada baarlamaanka bilaabmay 2016. Xildhibaanada cusub ee la doortay hadda, iyaga ayaa laga rabaa in ay soo jiitan kalsoonida shacabka Soomaaliyeed oo inta badan ku xiraan wax qabadkooga.
Midowga yurub iyo wadamada xubnaha ka ahba waxay aqoonsan yihiin horumarka la gaaray muddadii geedi socodka doorashooyinka. Wuxuuna geedi socodku ahaa mid nabad ah iyadoo xaalada amniga aynan wanaagsaneyn haddana waxaa ka qeybqadanayeen tiro badan oo codbixiyeyaal ah, kana dhacaysay Soomaaliya oo idil. Walloow laga soo hoos dhacay boqolkiiba 30℅ balanqaadyadii dhankabsiyaasadda, haddana guulo ayaa laga gaaray dhanka qoondada haweenka. Waxaase tan loo fasiran karaa in ay jirto fursad weyn loogu sii dadaali karo haweenka iyo dhalinyarada dhanka siyaasadda iyo arrimaha bulshada.
Hase ahaatee, geedi socodka doorashooyinka waxaa hareeyey handadaad, cagajugleyn, musuq maasuq iyo isdaba maryeyn ay sameeyeen dadka howsha waday, iyadoo guddiga loo xil saaray xalinta kuraasta muranka ka jiro ay awoodi waayeen in ay u gutaan waajibaadkii loo igmaday. Duruus ayey tahay in laga barto doorashadan si ay dadka Soomaaliyeed ugu suuro gasho in ay gaaraan mustaqbalka xuquuqdooda dimuquraadiyad oo buuxda u helan. Mashaakil ma ahayn in aan dadka Soomaaliyeed dhamaantood wada helin fursad ay ku codeeyaan, balse, ma aysan ahayn in ay dhacdo cagajugleyn, isdaba maryeyn, musuq maasuq, iyo sharicga oo laga saro maro. Soomaaliya waxay u baahan tahay hayado madax banaan si loo gaaro xaqiiqada iyo rajada la qabo.
Midowga Yurub iyo wadamada xubnaha ka ahba waxay u rajeynayaan hoggaanka siyaasadeed ee iman doona ee wadanka rajo wanaagsan in ay diirada ku saaraan caqabadaha hadda taagan: dib u heshiisiin, wada tashiyada is afgaradka loo baahan yahay, dejinta nidaamka dowladnimada, adeega iyo amniga dadku u baahan yahay, dhusida hatada amni oo lagu kalsoonaan karo, lana adkeeyo dastuurka kaasoo u noqon karo tiirka ay mashaariicda dgismaha dowladnimadu ku istaagi karaan. Baarlamaanka Federaalja waa dhawraha dastuurka. Waxaana ugu baaqaynaa xubnaha baarlamaanka cusub in ay u gutaan waajibaadkooda si sharaf iyo wanaag leg.
Haddii aan nahay Midowga Yurub waa sii wadi doonaa taageerida Soomaaliya oo ku salaysan hormarinta qiimaha iyo sharafta binaadanimada, gaarsiin karana mustaqbal wanaagsan dadka Soomaaliyeed.